Umhlahlandlela Womqali Ovela Ku-Semalt On Ikhasi leWebhu
Idatha nolwazi kuwebhu luyakhula usuku nosuku. Namuhla, abantu abaningi basebenzisa i-Google njengomthombo wokuqala wolwazi, noma ngabe bafuna izibuyekezo mayelana nebhizinisi noma bazama ukuqonda isikhathi esisha.
Nenani lemininingwane etholakalayo kuwebhu, livula amathuba amaningi Ochwepheshe bes Data. Ngeshwa, iningi lemininingwane kuwebhu ayitholakali kalula. Ihlinzekwa ngesakhiwo esingenakulungiswa esibizwa ngokuthi ifomethi ye-HTML engalandwa. Ngakho-ke, kudinga ulwazi nolwazi lomsayense wedatha ukuze alisebenzise - nude racing.
I-Web scraping yinqubo yokuguqula idatha ekhona ngefomethi ye-HTML ibe ifomethi ehlelekile engatholakala kalula futhi isetshenziswe kalula. Cishe zonke izilimi zokuhlela zingasetshenziselwa ukukhishwa kwewebhu efanele. Kodwa-ke, kulesi sihloko, sizobe sisebenzisa ulimi R.
Kunezindlela eziningana lapho idatha ingahlwithwa khona kuwebhu. Ezinye zezintandokazi zibandakanya:
1. Abantu Kopisha-Namathisela
Lena yindlela yokwenza idatha ephuthumayo kodwa ephumelelayo kakhulu. Kule nqubo, umuntu uhlaziya idatha yena bese eyikopisha kwisitoreji sendawo.
2. Ukubambisana kwetheksthi yokubhaliwe
Lena enye indlela elula kodwa enamandla yokukhipha ulwazi kusuka kuwebhu. Kudinga ukusebenzisa izilinganiso ezijwayelekile zokufanisa izilimi zezilimi.
3. Isikhombandlela se-API (20
Amawebhusayithi amaningi afana ne-Twitter, Facebook, LinkedIn, njll anikezela ngama-API omphakathi noma angasese angabizwa esebenzisa amakhodi ajwayelekile ukuze athole idatha ngesakhiwo esimisiwe.
4. I-DOM Parsing ( 20)
Qaphela ukuthi ezinye izinhlelo zingathola okuqukethwe okunamandla okudalwe yizikripthi zecala lamaklayenti. Kungenzeka ukuhambisa amakhasi ibe ngumuthi we-DOM oncike ezinhlelweni ongazisebenzisa ukuthola ezinye izingxenye zamakhasi. )
Ngaphambi kokuqala ukukhwabanisa kwewebhu ku-R, udinga ukuba nolwazi oluyisisekelo ku-R. Uma uqala, kukhona imithombo eminingi eningi engasiza. Futhi, kudingeka ukuthi ube nolwazi lwe-HTML ne-CSS. Kodwa-ke, njengoba iningi lososayensi lwedatha aluzwanga kahle nolwazi lwezobuchwepheshe lwe-HTML ne-CSS, ungasebenzisa isofthiwe evulekile njengeSelethi Gadget.
Isibonelo, uma uthola idatha kwiwebhusayithi ye-IMDB yamafilimu ayi-100 athandwa kakhulu ngesikhathi esinikeziwe, udinga ukukhipha idatha elandelayo kusayithi: incazelo, isikhathi sokuqalisa, uhlobo, isilinganiso, amavoti , ukuhola okuphelele, umqondisi nokuphonswa. Uma usuqede idatha, ungawahlaziya ngezindlela ezahlukene. Isibonelo, ungakha izinombolo zokuboniswa ezithakazelisayo. Manje uma unombono ojwayelekile walokho ukukhwaziswa kwedatha, ungenza indlela yakho nxazonke!